Wasiirka Gaashaandhigga Oo Kormeeray Xarunta Taakuleynta Ciidammada Xoogga Dalka (WARSAXAAFADEED) – idalenews.com
Wasiirka Gaashaandhigga Oo Kormeeray Xarunta Taakuleynta Ciidammada Xoogga Dalka (WARSAXAAFADEED)
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi ayaa maanta kormeer howleed ku tagay xarunta Taakuleynta Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee (Villa Baydhabo),Kulliyaddii Jaalle Siyaad iyo Xerada Guulwadaayasha oo ay intooda badan ka socdaan howlo dayactir ah.
Ugu horeyn Mudane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi Wasiirka Difaaca Dalka ayaa kormeerkiisa howleed ku tagay xarunta Taakuleynta Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee (Villa Baydhabo) waxaana uu halkaasi kula kulmay islamarkaana warbixinno kaga dhageystay saraakiisha Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee qaabilsan dhinacyada Saadka iyo hogaanka abaabulka.
Wasiirka ayaa uga mahad celiyey Saraakiisha Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee warbixinnada siiyey sida ay har iyo habeen ugu taaganyihiin u adeegidda Qarankooda waxaana uu Mudane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi ugu ammaanay islamarkaana bogaadiyey sida ay u socdaan shaqooyinka ka socda xarunta Villa Baydhabo.
Markaasi kadib Wasiirka Difaaca ayaa kormeer ku tagay xarumaha kala ah Kulliyaddii Jaalle Siyaad iyo Xeradii Guulwadeyaasha oo ay ka socdaan howlo dib u dhis ah waxaana uu Wasiirku soo kormeeray sida ay u socdaan howlaha dib u dhiska ah ee ay Wasaaradda Gaashaandhigga ka wado labadaasi xarumood isagoo sidoo kalena Warbixinno ka dhageystay Injineerrada hwshaasi dib u dhiska gacanta ku haya.
Wasiirka Gaashaandhigga Mudane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ka hadlayey markii uusoo dhameystay kormeerkiisa howleed kadib ayaa tilmaamay in uu aad ugu faraxsanyahay sida ay u socoto shaqada xarummaha uu maanta kormeerka ku tagay guud ahaantood isagoo intaasina ku daray in shaqada la qabtay hadana socota ay muhiim u tahay Wasaaradda Gaashaandhigga.
“runtii waxaan kormeerkeyga kusoo arkay wax aad iyo aad ii farxad geliya sababtoo ah howlaha dib u dhiska ee ka socda labada xarummood ee Kulliyaddii Jaalle Siyaad iyo Xerada Guulwadeyaasha waxey ku socdaan si deg deg leh waanna ku ammaanayaa injineerrada howsha gacanta ku haya qaabka ay dib u dhiska u wadaan dhowaanna waxaan rajeynayaa in la dhameeyo dib udhiskooda si loogu shaqeeyo xarumahan”ayuu hadalkiisa raaciyey Mudane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi Wasiirka Difaaca Dalka.
Ugu dambeyntii Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xusay in Wasaaraddu ay sii wadi doonto howlaha dib u dhiska ah ee lagu sameynayo dhammaanba xarumaha ay leedahay Wasaaradda Difaaca ayadoo dib u dhiskaasina lala kaashanayo hay’adaha iyo Dowladaha Soomaaliya saaxiibada la ah wuxuuna ku booriyey shacabka Soomaaliyeed iney ka qeyb qaataan dib u dhiska Dalkooda.
Daawo Muuqaal ahaan Faah Faahin dheeraad ah oo ku Saabsan Weerar Ismiidaamin ah oo ka dhacay Gaalkacyo iyo Qasaaraha ka dhashay
Taliska Booliska Degmadda X/weyne ayaa sameeyey barro cusub oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka Degmadaasi